प्रचण्डकै कारण एमसीसी सम्झौता गिजोलियोः प्रचण्ड | News Nepal
प्रचण्डकै कारण एमसीसी सम्झौता गिजोलियोः प्रचण्ड
पोखरा । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफूहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिजोलेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रेस चौतारी कास्कीले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा पहिले सम्झौता गर्ने र पछि पारित गर्न नहुने भनेर प्रचण्डले गिजोलेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘एमसीसीको सम्झौता गर्‍या कसले ? (शेरबहादुर) देउवाले, प्रचण्डले । एमसिसी गिजोल्या कसले ? त्योचाहिँ प्रचण्डले मात्रै हो । अरुले गिजोलेको होइन, यता गिजोल्या’छ, उता गिजोल्या’छ’ उनले भने, ‘पदमा हुँदा एउटा कुरा गर्‍या’छ, बाहिर निस्किँदा अर्को कुरा गर्‍या’छ । केपी ओली हुँदा एउटा कुरा गर्‍या’छ, अर्को कुरा हुँदा अर्को कुरा गर्‍या’छ । मजाकको विषय हो यो विदेशीसँगको सम्बन्ध ?’
प्रचण्डकै कारण एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुन नसकेको उनले बताए । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौता ढुसी पारेर राखेको उनले टिप्पणी गरे । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गर्न खोज्दा सभामुखले रोकेको पनि बास्कोटाले बताए ।
‘कृष्णबहादुर महराजीले पनि पेन्डिङमा हाल्दिनु भो । अग्नि सापकोटाजी पनि ढर्रामा ढुसी पारेर राख्दिनु भो, निकाल्दै निकाल्नु भएन’ उनले भने ।
अहिले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सत्तारुढ दललाई एमालेको सहयोग नचाहिने पनि बास्कोटाले ‘हामीतिर फर्किनै पर्दैन । उहाँहरुको १ सय ६५ सिट छ । झन्डै २ तिहाइ छैन त ? गरे भइहाल्यो नि एमसीसी’ उनले भने ।
एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने सत्तापक्षको हातमा रहेको भन्दै बास्कोटाले संसदमा पेश गरेपछि एमालेले निर्णय गर्ने बताए ।
‘पहिले उहाँहरुले ल्याउनुस्, त्यसपछि हामी पढौंला, त्यसका जम्मै बुँदाबुँदा केलाउँला ।…सेनाले परेड खेल्नी हो कि ? बिजुलीको प्रशारण लाइनमात्रै बनाउने हो कि ? भारतको अनुमति किन चाहिनुपर्ने हो वा किन नचाहिनुपर्ने हो ? त्यो कुरा त छलफल गरौंला नि !’ उनले भने ।
प्रकाशित मिति : 2021-09-21
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) नेता भीम रावलले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विवाद संसदले अधिकारयुक्त समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने बताएका...
प्रभु साह एमालेमै सक्रिय, ओलीसँग झापा-मोरङ यात्रामा निस्किए
काठमाडाै । केही महिनादेखि असन्तुष्ट रहेर निष्क्रिय बसेका प्रभु साह एमालेमै सक्रिय भएका छन्। माओवादी छाडेर एमालेमा आएपछि स्थायी कमिटीमा...
गलत तत्वहरू बाहिरिएपछि एमाले एकढिक्का भयो: ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खराव तत्वहरू बाहिरएपछि एमाले एकढिक्का बनेको बताएका छन् । प्रचण्ड र माधव...
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले आज शनिबार मुलुकभर वडास्तरका अधिवेशन गर्दैछ । आसन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत आज वडा अधिवेशन र ९...
जनभेटघाट तथा विकास निर्माणका आयोजनाबारे छलफलमा व्यस्त पुर्वमन्त्री पुन
रुकुम पुर्व । पुर्व मन्त्री एवम नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य गणेशमान पुन गृह जिल्लामा पार्टी कार्यकर्ता र जनभेटघाटमा व्यस्त...